Imibono eyi-12 Yokuhlukanisa Ukumaketha Kwakho Okuqukethwe | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 22, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngiyalithanda iqiniso lokuthi abafundi bethu banamathela kithi yize singakwazi ukudala ubuciko obugqamile. Ukukala nokushicilela ithani le-infographics kusiza ukuhlukanisa ukushicilelwa kwethu kwabanye abangaphandle - kepha asikwedluli kakhulu lokho. Okwethu uchungechunge lwezingxoxo ze-podcast nabaholi bezokumaketha umzamo owodwa.
Isizathu esiningi sokunamathela kokuqukethwe kombhalo okufingqiwe kususelwa kumbono wokusebenza kahle. Sinezihloko eziningi esingabhala ngazo hhayi izinsiza eziningi kakhulu. Le infographic evela ku-Oracle iyangikhuthaza ukuthi ngithole ubuciko obuthe xaxa, noma kunjalo. I-infographic, Imibono engu-12 Emangazayo Yokumaketha Okuqukethwe (Lokho Akuwona Amaposi Ebhulogi), inikeza ngamathiphu amahle wokuhluka kokuqukethwe kwakho.
Imibuzo - Bhala okuqukethwe kwakho njengemibuzo.
Twitter - Khipha okuqukethwe kuma-chunks ku-Twitter.
Amashadi - Hlukanisa okuqukethwe kwakho ngamashadi ahlukile.
Ucwaningo lwesigameko - Gqamisa ikhasimende bese wabelana ngesifundo secala.
Umugqa Wamahlaya - Bhala okuqukethwe kwakho kumucu wokuqukethwe ongabiwa kalula.
Umlayezo wombhalo - Buza ucwaningo nge-SMS bese wabelana ngemiphumela.
Series - Bhala uchungechunge olunezingxenye eziningi ukugcina abantu bebuya.
Ungahlukıselana - Curate bese wabelana ngokuqukethwe kusayithi lokuqukethwe komphakathi njenge Pinterest.
Izingxoxo - Sebenzisa ifomethi yokuxoxisana bese wabelana ngezimpendulo ezivela kochwepheshe ..
okungajwayelekile - Zama izitayela ezahlukahlukene, ama-mouseovers, namafomethi wokuxhumana ukuze uhlanganyele abafundi.
Uluhlu - Bhala umhlahlandlela noma uhlu lwamagama (bese ugcine usesikhathini!).
Siyathanda nokwabelana ngomsindo, ividiyo, ukubukwa kuqala kwemibiko namaphepha amhlophe, futhi - yi-infographics. Yimiphi eminye imibono yokuthengisa okuqukethwe oyizamile esebenza kahle? Zizwe ukhululekile ukuphawula futhi wabelane!
Tags: Ucwaningo lwama-caseamashadiimichilo yamahlayaimiqondo yokuqukethweimibono yokuthengisa okuqukethweuchungechunge lokuqukethweamathiphu wokuqukethweglossaryziqondiseizingxoxoPinterestImibuzouchungechungeshareimiyalezoTwitterOkungavamile